Fifaninanan-kira : Misokatra ny fandraisana anjara amin’ny « Libertalia Music-Records » -
AccueilVaovao SamihafaFifaninanan-kira : Misokatra ny fandraisana anjara amin’ny « Libertalia Music-Records »
Fifaninanan-kira : Misokatra ny fandraisana anjara amin’ny « Libertalia Music-Records »
18/01/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Miditra amin’ny andiany faha-5. Toa ny isan-taona, dia misokatra ho an’ireo mpanakanto, na efa velontena, na ireo vao misandratra ny fifaninanan-kira « Libertalia Music-Records ». Misokatra amin’ity volana janoary ity ny fisoratana anarana ho an’ireo liana ny amin’izany, ka maniry ny hanaraka ny dian’i Tsiliva sy Kristel Ratri, izay efa nahazo ny fandresena tamin’ny fifaninanana. Tanjon’ny fifaninanana ny fitondrana ny mozika malagasy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenana, ka tonga eto amintsika hijery ireo mpanakanto voafantina, na ireo trano mpamokatra manana ny lazany, na ireo mpikarakara hetsika ara-kolotsaina, na ireo mpitondra sy mpitantana mpanakanto… Hampiavaka ity andiany faha-5 ity ny fitondrana ny hetsika ivelan’Antananarivo, ka any Nosy Be manoloana ny tora-pasika no hanatanterahana ny hetsika ny volana mey ho avy izao.
Takiana amin’ireo mpanakanto te handray anjara amin’ity hetsika ity ny kisarisarin’ny mety ho fonon’ny rakikira telo, santionan’ny sangan’asa noraketina anaty kapila mangirana ny mombamomba ny mpandray anjara ary sary.
Mpiara-miombon’antoka amin’ny hetsika Libertalia ny IOMMA, izay anisan’ireo sehatra eo amin’ny tsenan’ny mozika aty amin’ny ranomasimbe indiana, ny hetsika ara-kolontsaina SAKIFO, ny La Réunion ary ny fampidirana ny hetsika ao anatin’ny IGODA, izay fiarahan’ny hetsika samihafa karakarain’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa frantsay SACEM, izay ahitana ny hetsika Azgo Festival (Mozambika), Bassine (Johannesburg), Bushfire (Swaziland), Zakifo (Durban), Sakifo (La Réunion ) ary Momix ( Mauritius )
Ankoatra ny lafiny ara-javakanto, dia mitondra ny anjara birikiny amin’ny sehatry ny sosialy ihany koa ny hetsika Libertalia. Amin’ity taona ity, lohahevitry ny hetsika ny ady amin’ny Sida, ka lohahevitra amin’izany « Ny rehetra miady amin’ny sida ». Mandritra ny 3 andro aharetan’ny hetsika, dia hisy ny fanentanana samihafa manodidina io areti-mandoza io.